I-RECICLOS: lolu uhlelo lokusebenza olushintsha indlela yokugaywa kabusha ngemiklomelo | Amagajethi Ezindaba
U-Emilio Garcia | 14/06/2022 08:00 | Aplicaciones
Sineplanethi eyodwa kuphela, futhi kufanele siyinakekele ukuze siphile kahle kanye neyezizukulwane ezizayo. Yingakho amaphrojekthi namapulatifomu afana I-RECICLOS, izibophezele emvelweni nasekugayweni kabusha esimweni esinjalo.
Ngokuqondile, kusekelwe isistimu ye-SDR, okungukuthi, Uhlelo Lokubuyisela Nomvuzo, ngaleyo ndlela ivuza izakhamuzi ezizibophezele ekugayweni kabusha kanye nempilo esimeme kakhulu. RECYCLES izokuvumela ukuthi uzuze leyo mivuzo ngesenzo esilula, futhi esihle kakhulu, sokwenza kabusha amathini namabhodlela eziphuzo epulasitiki. Kulula lokho.
1 RECICLOS kanye nesistimu yayo ye-SDR
2 Isebenza kanjani i-SDR?
3 Amaphuzu Azuziwe
4 Kungani ukhethe ama-RECYCLES?
RECICLOS kanye nesistimu yayo ye-SDR
Ecoembes kube yiyona ngemuva kwalolu hlelo lwe-SDR, okuyi- ukuziphendukela kwemvelo kumodeli yamanje yokugaywa kabusha ukuthi, naphezu kweqiniso lokuthi abantu abaningi asebevele bagaywa kabusha, kusekhona abanye abamanqikanqika ukwenza kanjalo.
Uhlelo lwe-SDR lubuye luthuthuke, kufaka phakathi ubuchwepheshe bedivayisi yeselula njengesisekelo. Imihlomulo ingasukela emalini eya kuma-NGO, iye kuma-raffle amabhayisikili, izikuta zikagesi, amathikithi ezithuthi zomphakathi, njll., okungukuthi, yonke into ihlobene nomphakathi ozinzile.
I-RECICLOS ifuna ukuthi yonke le mfucumfucu ebingagcina ingcoliswe udoti igcine ingasasetshenziswa, manje isithole ithuba elisha lokukhonza ukugaywa kabusha nokusebenzisa kabusha zamapulasitiki nezinsimbi kulezi zitsha.
Futhi uma unentshisekelo ku-RECICLOS, tshela ukuthi isivele ikhona kwezimbalwa omasipala bawo wonke ama-CC.AA. yezwe, ukushintsha imikhuba yezakhamizi ukuze uthole umhlaba ongcono, ungabheka ukuthi i-RECICLOS isifinyelele idolobha lakho kuwebhusayithi yayo ethi ww.reciclos.com. Futhi, ukusebenza, kufaka phakathi ubuchwepheshe ezitsheni eziphuzi ukuze izakhamuzi zibeke amathini azo namabhodlela epulasitiki eziphuzo lapho nokuthi ngohlelo lokusebenza olutholakalayo lwe-iOS ne-Android, lezi zikhuthazo zingatholakala.
Bafaka nemishini ye-RECICLOS kwezinye izindawo, njengeziteshi zokuthutha, izindawo zokuthenga nezokungcebeleka, njll., ukuze izakhamizi zikwazi. sebenzisa kabusha futhi lapho bephumile Kusuka ekhaya.
Isebenza kanjani i-SDR?
I-RECICLOS isebenza ngendlela elula futhi enethezekile ngenxa yobuchwepheshe obusha. Into yokuqala ukulanda ifayela uhlelo lokusebenza lwamahhala RECYCLES kudivayisi yakho yeselula:
Landa uhlelo lokusebenza lwe-iOS/iPadOS
Mayelana nokusebenza kwe-SDR, kulula kakhulu uma usufake uhlelo lokusebenza kudivayisi yakho yeselula, futhi udinga izinyathelo ezi-5 kuphela:
Vula uhlelo lokusebenza RECYCLES kudivayisi yakho yeselula.
Skena ibhakhodi yekani lesiphuzo noma ibhodlela lepulasitiki ngohlelo lokusebenza lwe-RECYCLES.
Idiphozi isitsha esitsheni lapho ufuna ukugaywa kabusha, kungaba esiphuzi noma umshini we-RECICLOS.
Skena i-QR yesiqukathi noma umshini.
Zuza amaphuzu bese uwashintshanisa ukuze uthole izinzuzo ezisimeme noma zomphakathi.
uma usuhambile ukuqongelela amaphuzu, ungayisebenzisela izinjongo zenhlalo noma zokusimama, ukunakekela umphakathi kanye/noma imvelo. Futhi ukuthi amaphuzu angashintshwa ngeminikelo yama-NGO, amathikithi ezithuthi zomphakathi, ama-raffles wezimoto ezihambayo ngaphandle kokukhipha, ukuthuthukiswa komakhelwane, njll.
Kungani ukhethe ama-RECYCLES?
Enye ye izizathu zokusebenzisa i-RECYCLES ukuthi isekelwa ubuchwepheshe obusha, ukuzivumelanisa nezikhathi ezintsha nokwenza yonke inqubo iqonde futhi ibe lula. Futhi ngezinjongo zenhlalo nokusimama ezisekelwayo, kanye nenzuzo yokukhuthaza ukugaywa kabusha kwamathini namabhodlela epulasitiki.
Kodwa kukhona okunye, okufana nalokhu ngemuva kwale SDR kukhona isikhungo esifana ne-Ecoembes, okungathenjwa futhi osekunesikhathi eside bezama ukushiya izwe elingcono futhi baguqule indlela yokuphila yabantu abaningi ezweni lakithi. Futhi idalwe i-Circular Lab, isikhungo esivulekile sokusungula lesi sikhungo futhi yathuthukiswa ngobuchwepheshe be-Spanish obuyi-100%.
Ngakolunye uhlangothi, lokhu kubuye kuhambisane ne- okuhloswe kabusha okuhloswe yi-European Union, eziya ngokuya ziba nesifiso sokuvelela futhi kudingeka ukuzinikela okwengeziwe okuvela kuwo wonke umuntu ukuze sikufeze.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » I-RECICLOS: lolu uhlelo lokusebenza oluguqula indlela yokugaywa kabusha ngemiklomelo